Nations League၊ အီတလီသည်ရှုံးပွဲမရှိ၊ တတိယနေရာ• musanews
မာတီဒိ၊ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၁
စတိုင်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော အကောင်းဆုံး အိမ်အလှဆင် စိတ်ကူးများ...
အနာဂတ်၏ဖက်ရှင်- NFTs နှင့် Metaverse အကြား
ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဖက်ရှင်နှင့် အလှတရား ဗီဒီယိုများကို ဖန်တီးပါ။
စိတ်​ဓာတ်​ကျရင်​ မင်းရဲ့ ဓါတ်​ပုံ​တွေရဲ့ အ​ရောင်​က​နေ မင်းသိမှာပါ...
Leni Klum၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ အားကောင်းအောင်လုပ်ပါ။
လန်ဒန်တွင် Emily Ratajkowski သည် သူမ၏စာအုပ်ကို ကြော်ငြာရန်
Bella Thorne သည် သူ့အမေအတွက် သတို့သမီးအရံအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
လွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း နှင့် ဆက်သွယ်မှု
သမိုင်းတွင် Italtennis - ထိပ်တန်း 10 စာရင်းတွင် Azzurri နှစ်ခု
တစ်နှစ်အတွင်း ပြိုင်ပွဲ4ခုအနိုင်ရသည့် ပထမဆုံး အီတလီနိုင်ငံသား
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း အားကစား Nations League၊ အီတလီသည်ရှုံးပွဲမရှိ၊ တတိယနေရာ
အောက်တိုဘာလ 10, 2021
ရောဘတ်တိုမန်စီနီ၏အီတလီသည်နေးရှင်းလိဂ်ဒုတိယအဆင့်ဆီမီးဖိုင်နယ်တွင်ရှုံးပွဲမရှိရှုံးနိမ့်ခဲ့သော်လည်းပြိုင်ပွဲသစ်၌တတိယနေရာကိုဆက်လက်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်သိမ့်ဗိုလ်လုပွဲတွင်ဘယ်လ်ဂျီယံကို ၂-၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများများစွာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်စပိန်သည်ဥရောပပြိုင်ပွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခရောက်စေခဲ့သည်၊ မည်သည့်အသင်းကမှ ၃၇ ပွဲဆက်တိုက်မရှုံးခဲ့ဖူးပါ။ ဆွီဒင်ကိုအနိုင်ယူပြီးဗိုလ်လုပွဲမှာအရူးအမူးဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ဥရောပမှာအောင်ပွဲခံတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိငါတို့ရဲ့ကောင်လေးတွေရှိတယ်။
ဒါပေမယ့်မင်းသိတဲ့အတိုင်းဘဲ၊ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်၊ ဒါကြောင့် San Siro အားကစားကွင်းမှာ Luis Enrique ရဲ့အမျိုးသားအသင်းကသုံးရောင်ခြယ်ရွေးချယ်မှုကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကိုအကောင်းဆုံးမဟုတ်ပဲယုံကြည်ပြီးလှောင်ပြောင်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံပြင်သစ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သောဗိုလ်လုပွဲအတွက် Iberians များဖြစ်ပြီး Azzurri သည်ဖီဖာအဆင့်တွင်နံပါတ်တစ်ဖြစ်သောဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်နောက်ဆုံးပွဲသာရှိသည်။
ဥရောပချန်ပီယံရှစ်တွင်ရှုံးနိမ့်သောပြိုင်ဘက်ကိုကျော်ဖြတ်ရန်နောက်ထပ်ဖြတ်ကျော်သော်လည်း Barella နှင့် Berardi တို့၏သွင်းဂိုးများကြောင့် ၂-၁ ဂိုးဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်။
နို ၀ င်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ဆွစ်ဇာလန်နှင့်ရောမမြို့အိုလံပစ်အားကစားကွင်း၌ယှဉ်ပြိုင်ရမည့်ထင်မြင်ချက်သည်ကာတာ၌ကျင်းပမည့်ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲအတွက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်သည့်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သော်လည်းအောင်မြင်မှု၏အရသာကိုမြည်းစမ်းဖို့လိုသည်။
ရောဘတ်တိုမန်စီနီသည်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အပြောင်းအလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းအပြုံးမပျက်ဘဲကောင်းကောင်းသိသည်။ "ဥရောပချန်ပီယံရှစ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ရဲ့ပွဲဖြစ်ရင်ငါတို့အနိုင်ရရမယ်" ဟု Marches မှနည်းပညာကော်မရှင်နာမင်းကြီးပြောသောစကားများ မရ။ ဒုတိယရည်မှန်းချက်ကိုရေးသားသူ Berardi က“ အဆင့်အတွက်အဖိုးတန်အောင်မြင်မှုတစ်ခု” ဟုဆိုသည်။
ဆောင်းပါး Nations League၊ အီတလီသည်ရှုံးပွဲမရှိ၊ တတိယနေရာ ပထမ ဦး ဆုံးအပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် အားကစားဘလော့ဂ်.
ယခင်ဆောင်းပါးဆားအရသာ ... နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကြာပြီး
နောက်ဆောင်းပါးAdam DeVine နှင့် Chloe Bridges တို့ကလည်းဟုတ်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏မဂ္ဂဇင်း၏ဤအပိုင်းသည်အခြားဘလော့ဂ်များနှင့်ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသောမဂ္ဂဇင်းများမှတည်းဖြတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ လှပပြီးသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကိုမျှဝေခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏သတင်းများကိုဖလှယ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်မျှဝေခြင်းကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းကိုအခမဲ့နှင့်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သော်လည်းဝက်ဘ်အသိုင်းအဝိုင်းတွင်ဖော်ပြသောအကြောင်းအရာများ၏တန်ဖိုးကိုမျှဝေရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဒီတော့ ... ဘာကြောင့်ဖက်ရှင်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်တွေကိုရေးရတာလဲ။ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးပြီလား။ အတင်းအဖျင်း? ဗေဒ, အလှအပနှင့်လိင်? သို့မဟုတ်ထိုထက်မက? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းဟာအမြင်အသစ်တစ်ခု၊ ဦး တည်ချက်အသစ်တစ်ခု၊ အမြီးအမောက်အသစ်တစ်ခုကိုယူကြလို့ပဲ။ အရာရာပြောင်းလဲသွားပြီးအရာရာတိုင်းဟာအရိပ်အသစ်တွေနဲ့အလင်းရောင်တွေထွန်းလင်းတောက်ပနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးစကြဝuniverseာဟာအဆုံးမဲ့ပြီးအမြဲတမ်းအရောင်အသစ်တွေနဲ့ကြီးမားတဲ့ palette ပါ။ ပို၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ ထိခိုက်လွယ်သော၊ လှပသောဉာဏ်ရည်နှင့် ... အလှအပသည်ကမ္ဘာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။
ဘုရင်မကြီးရဲ့ Gambit ပြန်လည်သုံးသပ်
MAZINGER Z ကိုပြန်သွားသည်
Amore anche လှပမှု Calcio capelli အိမ် cellulite ရုပ်ရှင်ရုံ လာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မိန်းမ အမြိုးသမီးမြား ecco ပုံ Giada D'Alleva ဟောလိဝုဒ် ဆောငျးရာသီ La နှုတ်ခမ်း Loris Old မိတ်ကပ် မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပညာရှင် မိုးတား ဂီတ occhi patrician saint တူးရွင်းပြား စိတ်ရောဂါ စိတ်ပညာ ရောဂါမပျံနှံ့အောင်ကာဆီးတားခြင်း အနီရောင်ကော်ဇော ရိုစီတီ seductive ချစ်သူ sexy စျေးဝယ် အိပ် အားကစား နေ လမ်းကြောင်း လမ်းကြောင်းသစ် လူကို Vampires Vita
musa.news သည်ဘလော့ဂ် - မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်ပြီးဖက်ရှင်၊ မိတ်ကပ်၊ ဖက်ရှင်၊ သိချင်စိတ်၊ သဘာဝကုစားမှုများ၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ စိတ်ပညာ၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊
ကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ချန်ပီယံဖြစ်သည်။ ဂုဏ်အသရေ၏လိပ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 12, 2021
အောက်တိုဘာလ 20, 2021